ဆွေဝင်း (Myanmar Now) – အရှိန်တက်နေသော မွတ်စလင်စီးပွားရေးကို သပိတ်မှောက်ခြင်း – MoeMaKa Burmese News & Media
ဆွေဝင်း (Myanmar Now) – အရှိန်တက်နေသော မွတ်စလင်စီးပွားရေးကို သပိတ်မှောက်ခြင်း
September 17, 2015 Aung Htet
ရန်ကုန်တွင် တွေ့ရသော မွတ်စလင်အမျိုးသားတစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – ခွန်းလတ် / Myanmar Now)
ယခုဆောင်းပါးသည် Myanmar Now တွင် ဖော်ပြသည့် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
အသုတ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး (Myanmar Now) – အစ္စလမ်ဘာသာဝင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ကိုလွင်ထွန်းသည် ယမန်နှစ်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် စက်ရုံတစ်ရုံဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ အအေးခန်းများပါဝင်သည့် ထိုစက်ရုံတည်ဆောက်မှုအတွက် သိန်း ၃ဝဝ ခန့် ကုန်ကျပြီးခါမှ စက်ရုံအတွက်လိုအပ်သည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းရှာမရခဲ့ပေ။ ထိုကုန်ကြမ်းမှာ အမဲသားဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှာ လပွတ္တာရှိ မွတ်စလင်ပိုင် အမဲဖျက်သားသတ်ရုံ ၇ ရုံလုံး လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းသွားရခြင်းကြောင့်ပင်။ ၂ဝ၁၄ ဇန်နဝါရီတွင် နှစ်စဉ်ဆွဲနေကျ သားသတ်လိုင်စင်များရရှိရန် ကြိုးစားကြသော်လည်း ဒေသခံအာဏာပိုင်တို့က အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (မဘသ) မှ ထင်ရှားသည့် ဆရာတော်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဦးစီးနေသော အသင်းတစ်သင်းကို လိုင်စင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သူတို့ လိုင်စင်ရရန်မဖြစ်နိုင်တော့ချေ။ ထို့ကြောင့် သားသတ်ရုံများ နှင့်အတူ ကိုလွင်ထွန်း၏ အသစ်စက်စက် အမဲသား စည်သွတ်စက်ရုံကိုလည်း ပိတ်သိမ်းထားလိုက်ရသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်တို့မှာ လူဦးရေ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် တချို့မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ပြီး သားသတ်လုပ်ငန်း၊ အမဲသားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကအားထား၍ အသက်မွေးနေကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလတစ်လျှောက် ဘာသာရေး လူမျိုးရေး တင်းမာမှုများ တအုံနွေး နွေးဖြစ်ထွန်းခဲ့ရာ အရပ်သားတစ်ပိုင်း အစိုးရတက်လာပြီး တစ်နှစ်အကြာ ၂ဝ၁၂ တွင် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ပွားသည့် အခြေ အနေအထိ ပေါက်ကွဲသွားသည်။ ပိုမိုပွင့်လင်းလာသည့် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွင် အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့၏သြဇာ ကျယ်ပြန့်လာကာ ၎င်းတို့၏ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့်မှုတွင် မွတ်စလင်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်။
၂ဝ၁၃ နှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ မဘသ ဆရာတော်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ မွတ်စလင်ပိုင် သားသတ်ရုံများစွာ ပိတ်သိမ်းခဲ့ရပြီး၊ ထိုသားသတ်ရုံများမှလည်းကောင်း သို့တည်းမဟုတ် ဆရာတော်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တို့ဦးဆောင်၍ ကျွဲနွားသယ်ဆောင်လာသူတို့ကို စစ်ဆေးမှုမှလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သော ကျွဲနွားအရေအတွက်မှာ အ ကောင်ရေ ထောင်နှင့်ချီရှိကြောင်း Myanmar Now ၏ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရ သိရှိခဲ့ရသည်။ မွတ်စလင်တချို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းခြင်း မပြုလုပ်ရသည့်တိုင် ဝင်ငွေအကြီးအကျယ် ထိခိုက်ကျဆင်းသွားသော ထိုဖြစ်စဉ်များကိုကြည့်လျှင် နယ်ဘက်တွင် မဘသ၏သြဇာ မည်မျှထိကြီးမားကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Myanmar Now ကရရှိခဲ့သော အစိုးရစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တို့ကို မေးမြန်း ချက်များအရ တိုင်းအစိုးရ ထိပ်တန်းအာဏာပိုင်တို့က သံဃာတော်တို့၏ ထိုလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း သိရှိနေရုံသာမက မွတ်စလင်သားသတ်ရုံများ ပိတ်သိမ်းစေရန် လှုပ်ရှားမှုများကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြောင်းသည်။ ထို့ပြင် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ သံဃာတော်များဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဇီဝတဒါနသက်ကယ်ဟုခေါ်သောအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သည့် ရာနှင့်ချီသော ကျွဲနွားများကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ တရားဝင်တင်ပို့ခွင့်ရခဲ့သည်။ ထိုဒေသမှာ နိုင်ငံမဲ့ ရိုဟင်ဂျာခေါ် လူအများခေါ် ဝေါ်သုံးစွဲနေသည့် ဘင်္ဂါလီဆိုသော လူမျိုးတို့နှင့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား သွေးထွက်သံယို ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့သော နေရာဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို မဘသအဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိသည့် ကျွဲနွား တိရိစ္ဆာန်များ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို.နယ်ရှိ ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွင်တည်ရှိသော မဘသ ဗဟိုရုံးချုပ်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးကျော်စိန်ဝင်းက “ဇီဝတဒါန သက်ကယ်အဖွဲ့မှာ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး ဆရာတော်များလည်း ပါကြပါ တယ်။ တိုက်ရိုက်ကြီး ဒီကနေ (မဘသဗဟိုကနေ) ညွှန်ကြားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ဆရာတော် တွေအများစုဟာ မဘသအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ …မသသ အဖွဲ့ကတော့ ဇီဝိဒါနအဖွဲ့လှုပ်ရှားတာတွေကို ထောက်ခံပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် ကိုလွင်ထွန်းမှာ ရန်ကုန်တွင်လည်း ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သည်။ သို့သော် မဘသအဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် လပွတ္တာရှိ သူ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အလားအလာကင်းမဲ့နေသည်။
“မွတ်စလင်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို သပိတ်မှောက်ဖို့ လှုပ်ရှားနေတာကြာပြီ။ စာတွေလည်းဖြန့်နေတာပဲ။ ရဲကသိပေမယ့် ဘာမှအရေးမယူဘူးလေ” ဟု သူကဆိုသည်။
• ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်
မွတ်စလင်တို့၏အဆိုအရ မဘသအဖွဲ့ဝင်းဆရာတော်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ၎င်းတို့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ် ငန်းများနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်များ ထိခိုက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ကျွဲနွားရှားပါးမှုနှင့် အစိုးရ၏ တင်းကျပ် သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကြောင့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မြို့နယ်များတွင် မွတ်စလင်တို့ အစ္စလမ် ထုံး တမ်းစဉ်လာနှင့်အညီ အမဲပေါ်၍ အိဒ်ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့ပေ။
“ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေခံဘာသာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်တာပဲ” ဟု ရန်ကုန် အစ္စလမ်ဌာနမှ အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဟာဂျီဦးအေးလွင်က ဆိုသည်။ “ကျွန်တော့်ခန့်မှန်းခြေအရဆိုရင် မွတ်စလင်စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာ ပုံမှန်ကို ပြန်မရောက်နိုင်သေးဘူး။ အမြတ် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆုံးရှုံးနေတာပဲ” ဟု သူက ဆက်၍ ဆိုသည်။
သို့သော် မဘသ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဦးကျော်စိန်ဝင်းက အသက်ကယ်ခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အတွေးအခေါ်အရ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့်အလုပ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“စီးပွားရေးထိခိုက်တယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ သူတို့စီးပွားရေးထိခိုက်အောင် တမင်လုပ်တာမှမဟုတ်တာ။ သူတို့က တော့ သတ္တဝါတွေကို ခုလိုသတ်မှပဲ ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဆိုတော့ သတ်မှာပေါ့ဗျာ။ ဘာသာရေးအရ သူတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာတင်ဆန့်ကျင်နေပြီ” ဟု ဦးကျော်စိန်ဝင်းက တယ်လီဖုန်းဖြင့်မေးမြန်းခန်းတွင် ပြောကြားသည်။
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အရပ်သားအမည်ခံအစိုးရတက်လာသည့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဘာသာ ရေးလူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများ၊ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်သည့် ပြောဆိုမှုများမြင့်တက်နေသည်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွေ့ရသည်။ အဖုအထစ်များလှသည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းသည် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် သမိုင်းဝင် ရွေး ကောက်ပွဲများမှတစ်ဆင့် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခု လှမ်းတော့မည်ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၂ မွတ်စလင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သွေးထွက်သံယိုအဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်နှစ်၂ဝ၁၃ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မဘသသည် နုနယ်သည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲတွင် ထင်ထင်ရှားရှားနေရာယူလာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာသည် အစ္စလမ်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရပြီဟုပြောဆိုသော မဘသသည် မွတ်စလင်တို့ကို ခွဲခြား ဆက်ဆံရန်ဟု ယူဆရသော မျိုးစောင့်ဥပဒေလေးရပ်ကို လွှတ်တော်တွင် တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းကို အောင်ပွဲခံသည့်ပွဲများ မဘသက ရန်ကုန်နှင့် အခြားမြို့နယ်များတွင် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်မှစ၍ ၂ ပတ်တိုင်တိုင် ကျင်းပနေပြီဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်တစ်နေရာတွင် စိုက်ထူထားသော ကျွဲ/နွားအသက်ကယ်ရန် ပါဝင်လှူဒါန်းကြ ရေး နှိုးဆော်ချက် ပိုစတာ (ဓာတ်ပုံ – Myanmar Now)
ဇွန်လက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရဟန်းရှင်လူပရိသတ် ၆,၈ဝဝ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သော မဘသ ဒုတိယညီလာခံတွင်ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်စောင်အရ ဘာသာရေးပွဲတော်များတွင် မွတ်စလင်တို့ တိရိစ္ဆာန် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ပိတ်ပင်ရန် အစိုးရထံ တောင်းဆိုသွားမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မဘသ၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် သံဃာအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြု၊ ဗုဒ္ဓဝါဒ၏အနှစ်သာရကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိ စသော ဝေဖန် သံများလည်း ရဟန်းရှင်လူများကြားတွင် ပေါ်ထွက်နေသည်။
“တို့ကို လည်လှီးဖို့ လေ့ကျင့်နေတာ”
အရေးကြီးသည့် ရွေးကောက်ပွဲနှစ်တွင် မဘသ၏ လှုပ်ရှားမှုများကိုသုံး၍ စစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်နေသည့် လူတန်းစားတစ်ရပ်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သူ၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) တို့ကို တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု သူ့ကို ထောက်ခံသူများက ယူဆနေကြသည်။ မဘသနှင့် ဆက်နွယ်နေသော အချို့သော ရဟန်းတော်များကလည်း NLD သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်နေကြောင်း လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုထားသည်။
မွတ်စလင်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို သပိတ်မှောက်ရန်ပြောဆိုမှုများသည် မြို့ကြီးပြကြီးများတွင် အရာမထင်သော်လည်း ကျွဲနွားသတ်ဖြတ်ခြင်းကို စက်ဆုပ်ရွံရှာသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ မိရိုးဖလာအစဉ်အလာတစ်ခုကို အခြေခံသော ကျွဲနွား မသတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အကြား အောင်မြင်ခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်၏ စပါးကျီဟုကျော်ကြားသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ကျယ်ပြောလှသော စပါးခင်းများ၊ အင်းအိုင်ချောင်းများကြားဝယ် နေထိုင်နေကြသော လူဦးရေ ၆ သန်းတွင် အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီး၊ သောင်းဂဏန်းမျှသော မွတ်စလင်တို့မှာ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားရေးလုပ်ကိုင်နေကြသည်။
မြန်မာလယ်သမားအများစုမှာ ကျွဲနွားများကို မွေးမြူကြခြင်းမှာ ရောင်းစားရန် သို့တည်းမဟုတ် အသားပေါ်ရန် မဟုတ်ဘဲ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ခိုင်းစေရန်အတွက်သာ မွေးမြူထားကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ သို့မဟုတ် မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်ရန် စသည့် ငွေအမြန်လိုသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ကျွဲနွားများကို သားသတ်ရုံများသို့ ရောင်းချ သည်လည်းရှိသည်။ မဘသဆရာတော်တို့က လယ်သမားများကို ကျွဲနွားရောင်းချမှုမပြုရန်တားမြစ်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကိုယ်တိုင် သားသတ်လိုင်စင် ဆွဲ၍ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၄ နှစ်ဆန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ မဘသ ဆရာတော်များဦးဆောင်ပြီး ဇီဝတဒါန သက်ကယ်အသင်းကို ဖွဲ့စည်းကာ အစိုးရထံမှ သားသတ်လိုင်စင်များ ဝယ်ယူရေးအတွက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများထံမှ တစ် ကျောင်းလျှင် ကျပ်တစ်သိန်းကျ ထည့်ဝင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံမှုများရှိခဲ့သည်။
ထိုဆရာတော်များက ကျွဲနွားမသတ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တရားပွဲများကိုလည်း တိုင်းအတွင်းရှိ ကျေးလက်မြို့ရွာတို့တွင် ကျင်းပပြီး အလှုငွေရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွဲနွားသတ်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓအလိုကျမဟုတ်သော တိရိစ္ဆာန်များကိုအကျိုးမဲ့ ညှင်းဆဲ၊ သတ်ဖြတ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့သည် ကျွဲနွားမျိုးတုံးအောင် လုပ်ဆောင်နေကြသည်ဟုလည်း ထိုတ ရားပွဲများတွင် ဟောကြားခဲ့သည်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့တတွေအများက သွေးအေးလို့မနေသင့်ပြီ၊ သွေးအေးနေရင် သာသနာပျောက်လို့ လူမျိုးပျောက်ဖို့ကြုံလိမ့်မည်” စသည့် စာသားပါသော ၉၆၉ နှိုးဆော်သံ သီချင်းကိုလည်း ထိုတရားပွဲများတွင် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ သုံးစွဲခဲ့သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အများအပြားက ထိုလှုပ်ရှားမှုကို တက်ကြွစွာထောက်ခံရာတွင် အသုတ်မြို့နယ်မှ သက်တော် ၆၅ နှစ်အရွယ် ဆရာတော် ဦးပညိန္ဒသည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
“ကုလားသတ်လို့ ကျွဲနွားတွေလည်း ရာထောင်ချီ အမြောက်အမြားသေဆုံးခဲ့ပြီ။ နောင်ဆို ဒို့ဒေသမှာ ကျွဲနွားပြုန်းတီးတော့မယ်။ သူတို့ဘာလို့ ကျွဲနွားတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်တယ် ဆိုတာ သိလား။ တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို လည်လှီးဖို့လေ့ကျင့်နေ တာ” ဟု သူက မိန့်သည်။
• အစိုးရ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု
ကျွဲနွားများကယ်တင်ရေးဇီဝိတဒါနအဖွဲ့ဖွဲ့၍ လှုပ်ရှားနေသော မဘသအဖွဲ့ဝင်တို့က ဧရာဝတီတိုင်း ၂၆ မြို့နယ်ရှိဒေသအများ စုတွင် သားသတ်လိုင်စင်များကို မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များထံမှ ဆွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆွဲရာတွင် အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ အကူအညီလည်းရကြောင်း ပြောကြသည်။
ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံးတွင် တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင်က သူ့ရုံးခန်းအတွင်း မဘသအဖွဲ့ကကြီးမှူး သော ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းများအတွက် ထုတ်ဝေထားသည့် ဖတ်စာအုပ်များ အထပ်လိုက်တင်ထားသော ခမ်းနားသည့်ကျွန်း စားပွဲကြီးရှေ့တွင်ထိုင်လျက် သူသည် ကျွဲနွားကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ရှားနေသူ သံဃာတော်များကို သားသတ်လိုင်စင်အတွက် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ဈေးဖြင့် အထူးအခွင့်အရေးပေးထားကြောင်း Myanmar Now ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဆိုတော့ ကျွဲ၊ နွားသတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို သဘောမတူပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အ မြောက်အများ သတ်နေတာတွေကိုပေါ့။ ဒါကြောင့် ဇီဝိတဒါနအနေနဲ့ လိုင်စင်ယူတဲ့ မြို့တွေကိုလည်း စဉ်းစားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆရာတော်တွေအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြို့တွေကိုလည်း အများကြီး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရာမှာ မနှစ်ကရော ဒီနှစ်ရော လေလံဈေးနှုန်းရဲ့ တစ်ဝက်ကိုပဲ ယူစေခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ လေလံဈေးနှုန်းက ကျပ် ၁ဝဝ ဆိုရင် ကျပ် ၅ဝ ပဲ ယူစေပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အခွင့်အရေးပေးတာတွေတော့ရှိပါတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
ဦးသိန်းအောင်သည် ယခင်က စစ်တပ်တွင် ဗိုလ်မှုးချုပ်အဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ၊ နောင်တွင် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဖြစ်လာသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သူ့ကို ဧရာဝတီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။
ဇီဝတဒါနအဖွဲ့တွင်လှုပ်ရှားနေသောသူများထံမှ ကျွဲနွားမှောင်ခိုသယ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျွဲနွားတရားမဝင်ပေါ်သည်များကို သ တင်းရ လျှင်ရခြင်း ဖမ်းဆီးအရေးယူရန် အထူးအဖွဲ့များ စေလွှတ်ကြောင်းလည်း ဦးသိန်းအောင်က ရှင်းပြသည်။
လပွတ္တာအပြင် အခြားသော ဧရာဝတီိတိုင်းမြို့နယ်များတွင်လည်း မဘသဆရာတော်များက အမဲလိုင်စင်များဆွဲခဲ့ရာ ပန်းတနော်မြို့နယ်တွင်လည်း ၂ဝ၁၃ နှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ အလှုငွေသိန်း ၁၅ဝ ကျော် ရရှိပြီးနောက် သားသတ်ဌာန (၄) ခုလုံးကို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်၏ ခွင့်ပြုချက် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးဖြင့် သားသတ်လိုင်စင်များဆွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပန်းတနော်၊ မြတောင်ကျောင်းတိုက်မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်လည်းဖြစ်၊ မဘသဗဟို၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုးဖြစ်သူ ဆရာတော် ဘဒန္တဦးကုမာရာက မိန့်သည်။ ထိုသို့ဆွဲခဲ့မှုကြောင့် ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာနများ အသက်ချမ်းသာရရှိခဲ့ကြောင်း သူက ရှင်းပြသည်။
Myanmar Now က ရရှိထားသော တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား အတွင်းရေးမှုးဖြစ်သူ ဦးအေးကျော် လက်မှတ်ထိုးထားသည့် နိုဝင်ဘာ ၂ဝ၁၄ ရက်စွဲပါ စာတစ်စောင်တွင် ဇီဝိတဒါနအဖွဲ့များသည် တိုင်းအတွင်း၂၆ မြို့နယ်အနက် ၁၅ မြို့နယ်တွင် အမဲသားသတ်လိုင်စင်များဆွဲထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ထိုအဖွဲ့များက မည်သို့မည်ပုံဆွဲသည်ကိုမူ အသေးစိတ်မ ဖော်ပြထားပေ။
အချို့သောမြို့နယ်များတွင်မူ မဘသအဖွဲ့ဝင်များသည် မွတ်စလင်ပိုင် သားသတ်ရုံများကို ဝင်ရောက်စီးနင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကျွဲနွားသယ်ဆောင်လာသည့်ယဉ်များကိုရပ်ခိုင်းပြီး ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မွတ်စလင်သားသတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတို့သည် တရားဝင်လိုင်စင် သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျွဲနွားများကိုသတ်ဖြတ်နေကြောင်း၊ တရားမဝင်မှောင်ခို ခိုး ထုတ်နေကြောင်းလည်း သူတို့ကဆိုသည်။ ထိုသို့ ကျွဲနွားကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသူများထံမှ တရားမဝင်ကျွဲ နွား သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မှောင်ခိုထုတ်ခြင်းများကို သတင်းရလျင်ရခြင်း လျင်မြန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဧရာဝတီတိုင်းအစိုးက ၂ဝ၁၄ တွင် ထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုညွန်ကြားချက်တွင်ပင် သံဃာတော်များအနေဖြင့် ကျွဲနွားကိစ္စအရေးယူဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုယ်တိုင်မပါဝင်ရန်လည်း ဖော်ပြထားသည်။
• သန်းခေါင်းယံည စီးနင်းမှုများ
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တခွင် ကျယ်ပြောလှသည့်စပါးခင်းကြီးများနှင့် လက်ယှက်ထိုးထားသည့်သဖွယ် ကွေ့ပတ်စီးဆင်းနေသည့် ချောင်းမြောင်းအင်းအိုင်များကြားတွင် ညအမှောင် ကျရောက်ပြီဆိုသည်နှင့် မြို့ပြင်ရွာပြင်ဘက်သို့ ခြေဦးလှည့်သူ မရှိသ လောက်ရှားလှသည်။ သို့သော် ရန်ကုန်၏ အနောက်ဖက် ကီလိုမီတာ ၁၅ဝ ခန့်တွင် တည်ရှိသော ကျုံပျော်မြို့တွင်မူ မဘသ အမာခံတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မြို့၏ဇီဝိတဒါနသက်ကယ်အဖွဲ့တွင်လည်း အတွင်းရေးမှုးဖြစ်သူ ကိုဝင်းရွှေ၊ သူ၏ သူငယ်ချင်းများနှင့် သံဃာတော်တချို့မှာ ညအချိန်တွင် အထူးဝိရိယကောင်းနေသူများဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၄ နှစ်ဆန်းတွင် သူတို့အဖွဲ့သည် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာက နှစ်စဉ်ရောင်းချသော အမဲသားသတ်လိုင်စင် ၆ ခု အနက် ၅ ခုကို လေလံဆွဲရန် အလှူငွေ ၁၅၈ သိန်း ၆ သောင်း ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီး၊ အစိုးရ၏ ဇီဝိတဒါနအဖွဲ့များအတွက်ပေးထားသော အထူးလျှော့ဈေးအကူအညီဖြင့် လေလံဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် မြို့ပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံးသောသားသတ်ဌာနတစ်ခုအတွက် လေလံဆွဲဖို့ရာ လျှော့ဈေးဖြင့်ပင်မဆွဲနိုင်၍ လက်လျှော့ခဲ့ရသည်။
ထိုသို့လက်လျှော့လိုက်ရသော မွတ်စလင်ပိုင် သားသတ်ရုံအနီး မြက်တောများဆီသို့ ကိုဝင်းရွှေနှင့်အဖွဲ့ ညတိုင်ဆိုလျှင် သွား ရောက်ပြီး ကင်းပုန်းဝပ် ထောက်လှမ်းခဲ့ကြသည်။
“အဲဒီသားသတ်ရုံက တစ်ညဆိုတစ်ကောင်ပဲပေါ်လို့ရတာလေ။ တစ်ကောင်ထက်ပိုပြီးသတ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က မသ င်္ကာဘူးဆိုပါစို့၊ ဥပမာ နွားတွေကို ရုံထဲကိုဆွဲသွင်းလာတာကိုတွေ့ရင် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ခြုံထဲကနေထပြီး အတင်း သား သတ်ရုံထဲကို ဝင်လိုက်သွားပြီးစစ်ဆေးတယ်” ဟု သူက ကျုံပျော်ရှိ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုတွင် မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံ စဉ် ပြောပြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပထမနှစ်ခါဝင်စစ်ဆေးတဲ့အခါ နွားတွေကို သတ်မှတ်ချက် လိုင်စင်ထက် ပိုသတ်နေတာ တွေ့တယ်။ ဒါနဲ့ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာကို သွားအကြောင်းကြားပြီး အဲ့ဒီ သားသတ်ရုံပိုင်ရှင် မွတ်စလင်ကို နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းဖို့ ဖိအား ပေးခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သူလည်းနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခံရပြီး သူ့သားသတ်ရုံလည်း ပိတ်သွားတယ်” ဟု သူက ဆက်၍ ဆိုသည်။
ကိုဝင်းရွှေကဲ့သို့ မဘသအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဇီဝတဒါနသက်ကယ်လှုပ်ရှားနေသူများတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးအခေါ်များ၊ ကျွဲနွား တိရိစ္ဆာန် တို့ကို အမှန်တကယ် ချစ်ခင်သနားသည့်စိတ်၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ကို မုန်းတီးသည့်စိတ်၊ အစိုးရအာဏာပိုင်တို့၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို တွန်းလှန်ချင်သည့်စိတ် စသည့် ခံစားချက်ပေါင်းစုံတို့ ရောပြွမ်းနေကြပြီး ၎င်းတုို့ယုံကြည်ရာကို လုပ်ဆောင်နေသူများဟု ဆိုနိုင်သည်။
သူတို့ကဲ့သို့အဖွဲ့များက သားသတ်ရုံများကို ညဉ့်သန်းခေါင်းယံအချိန် ဝင်စီးနေခြင်းမှာ အမျိုးသားရေးဝါဒီဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့များနှင့် အစိုးရအာဏာပိုင်တို့ကြားရှိ ရှုပ်ထွေးလှသော ဆက်ဆံရေးကို မီးမောင်းထိုးပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ဆက်ဆံရေးမှာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အသွင် ဆောင်သကဲ့သို့၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မှု ပဋိပက္ခအသွင်သို့ ရောက်ရှိနေသည် လည်း တွေ့ရသည်။
• အနောက်တံခါးကို ကာကွယ်ခြင်း
ဧရာဝတီတိုင်းမဘသအဖွဲ့များ၊ ဇီဝတဒါနသက်ကယ်လှုပ်ရှားသူများနှင့် ကိုဝင်းရွှေနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများ၏ ပြောဆိုချက်အရ ၂ဝ၁၄ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ ၄င်းတို့အဖွဲ့များ ဖမ်းဆီးခဲ့သော ကျွဲနွားများမှာ အကောင်ရေ ၄,ဝဝဝ ခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထိုကျွဲနွားများကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာလယ်သမားများထံသို့ နောက်ပိုင်းတွင် ပေးလှူခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ပေးလှူရာ တွင်လည်း ကျွဲနွားများကို မသတ်ရ၊ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုရ၊ ကျွဲနွားများ မကျန်းမာပါက ဇီဝတဒါနသက်ကယ်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်အကြောင်းကြားရမည် စသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါသည့်စာချုပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
၂ဝ၁၄ နှစ်လယ်တွင် မဘသအဖွဲ့လှုပ်ရှားနေသူများသည် ဖမ်းဆီးရရှိသည့် ကျွဲနွားများကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မောင် တောခရိုင်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ ပေးပို့ရန် အစိုးရ၏တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်။ ဆင်းရဲလှသည့် မောင်တောခရိုင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက် အစွန်ဆုံးကျသည့်ဒေသဖြစ်ပြီး အိမ်နီးခြင်း ဘင်္ဂလားဒေ့်ရ်ှနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်တွင် တည်ရှိနေကာ၊ ထိုဒေသရှိ မွတ်စလင်ဦးရေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်လူမျိုး အရေအတွက်ထက် အဆမတန် သာလွန်နေသည်။ မဘသက ထိုနေ ရာကို အနောက်တံခါးဟု သမုတ်ထားပြီး အစိုးရကလည်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားလေသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအာဏာပိုင်တို့၏အဆုိုအရ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မျိုး နွယ်စုများ ထောင်ချီ၍ မောင်တောခရိုင်သို့ ဝင်ရောက်အခြေချလာခဲ့သည်။ မွတ်စလင်လူဦးရေနှင့်ယှဉ်လျှင် လူဦးရေနည်းနေ သော ရခိုင်လူမျိုးတို့ကို အားဖြည့်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေသော အစိုးရအာဏာပိုင်တို့နှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ကလည်း ၎င်းတို့ကို ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး မောင်တောခရိုင်အတွင်း ရွာများတည်၍ နေရာချထားခဲ့လေသည်။
သြဂုတ် ၂၄၊ ၂ဝ၁၄ ရက်စွဲပါ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များသို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် ညွန် ကြားချက်စာတစ်စောင်တွင် ဇီဝတဒါနသက်ကယ်အဖွဲ့များက တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ကျွဲနွားအကောင်ရေ ၁ဝဝ ကို မအူပင်သင်္ဘောဆိပ်သို့ သယ်ဆောင်ပြီး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သုို့ ပို့ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုလုိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပါရှိ သည်။
မွတ်စလင်တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကို တားဆီးမည့် “အနောက်တံခါးကို ကာကွယ်မည့်” အစီအမံဖြစ်ကြောင်း ကိုဝင်းရွှေက ဆိုသည်။
သူ့ထံမှရရှိသော ဓာတ်ပုံနှင့် ရုပ်သံမှတ်တမ်းများအရ ၂ဝ၁၄ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ မောင်တောရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထံသို့ပို့ဆောင်လိုက်သော ကျွဲနွားများ လှူဒါန်းပွဲကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ စစ်ဘက်အရပ် ဘက်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်လမ်းရှိ သူရိယစန္ဒာဝင်းသင်္ဘောကုမ္မဏီအကူအညီဖြင့် ကျွဲနွားများပို့ဆောင်ရန် အဓိက ကူညီစီစဉ်ပေးခဲ့ သူမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်ဇာတိ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ စစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း ဦးစိန်အောင် ဖြစ်သည်။
“အနောက်တံခါးသာမရှိရင် ပြည်မကြီးဆိုတာလည်း ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ပြည့်လျှံသွားမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးနွယ်စုတွေကို ဒီဘက်ရခိုင်ပြည်ကိုခေါ်ပြီး သူတို့နဲ့ပဲ အနောက်တံခါးကို လူသားတံတိုင်းနဲ့ခတ်ဖို့အစီအစဉ်ကို ၂ဝ၁၂ တည်းက ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုချပြတော့ သူတို့လည်းသဘောတူတယ်” ဟု ဦးစိန်အောင်က YMBA အသင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်သည့် ကြက်ခြေခတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အလံများဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသော သူ၏ရုံး ခန်းတွင် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။
သူသည် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၏ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓကလျာဏယုဝအသင်း (YMBA) ၏ အသင်းခွဲ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ကျွဲနွားများ နယ်ကျော်ပို့ဆောင်ရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ဧရာဝတီတိုင်းအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ကုန်မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ဦးဇော်အေးမောင်ကလည်း ထိုအ ချက်မှာမှန်ကန်ကြောင်း Myanmar Now သို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
မဘသ၏ မွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်သပိတ်မှောက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပုံရိပ် ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့၊ မက်ကွိုင်းယားတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပါမောက္ခ ရှောင် တာနယ်လ်က သုံးသပ်သည်။
“အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသေးစားဈေးဆိုင်တွေရော၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတွေရော၊ နောက်ဆုံး ငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေအားလုံး ထိခိုက်နေတဲ့သဘော ရှိပါတယ်” ဟု သူကဆိုသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်းမြို့ရှိ မွတ်စလင်စားသောက်ဆိုင်ရှင်တစ်ဦး၏ အဆိုအရ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို သပိတ် မှောက်ရန် နှိုးဆော်မှုများ စတင်ခဲ့သည့် ၂ဝ၁၃ မှ စ၍ သူ့ဆိုင်၏ အမြတ်သည် ပုံမှန် တစ်နေ့ ကျပ် တစ်သိန်းခန့်မှ နှစ်သောင်း အထိ ထိုးဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ အနီးနားရှိ မွတ်စလင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာမူ လုံးဝပိတ်သိမ်းပြီး ဆိုင်ရှင်မှာ မြို့မှ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ မွတ်စလင်တို့၏ထုံးတမ်းအတိုင်း ပြုလုပ်ထားသည့် ဟာလယ်အမဲသားကို မြို့တွင် မဝယ်နိုင်တော့သဖြင့် သူ၏ဖောက်သည်များအတွက် ချက်ပြုတ်ရောင်းချခြင်း မပြုနိုင်တော့ကြောင်း သူက ပြောသည်။
“ဟာလယ်လုပ်ထားတဲ့အမဲသားစားချင်ရင် ရန်ကုန်ကလူကြုံကိုလှမ်းမှာရတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း တော်တော်များမှာ အမဲသား ကို ဝယ်မရတော့ဘူး” ဟု သူက တိုးညှင်းစွာပြောကြားသည်။ စကားတိုးတိုးပြောရခြင်း၏အကြောင်းမှာ သူ့ဆိုင်ဘေးရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာထမင်းဆိုင်အဝင်ဝတွင် နှစ်ပေပတ်လည်မျှရှိသော မဘသအဖွဲ့၏ ၉၆၉ အမှတ်တံဆိပ်ကြီး ချိတ်ဆွဲထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် သူ၏ ဆိုင်ရှေ့တွင် “ငါ့နို့ရည်ကိုသောက်ပြီး ငါ့ကိုမိခင်အဖြစ် သဘောမထားနိုင်ဘူးလား သခင်” စာသားပါရှိသည့် နွားမေတ္တာစာချိုး၊ နွားဦးခေါင်းဓာတ်ပုံတို့ ပါရှိသည့် အစိမ်းရောင် မြေစိုက်ပိုစတာကြီး တည်ရှိနေသည်။ ထိုမြေစိုက်ပိုစတာကို ဇီဝိတဒါနသက်ကယ်အဖွဲ့များက စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွဲနွားမသတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီတိုင်းရှိမွတ်စလင်အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ မဘသအဖွဲ့ဝင်များ ငြိုငြင်မည်ကိုစိုး၍ လူသိရှင်ကြား မပြောရဲ မဆိုရဲဖြစ်နေကြသည်။ အချို့သောမွတ်စလင်များကမူ နိုးကြွနေသော အမျိုးသား ရေးအခြေခံ ဗုဒ္ဓဘာသာလှုပ်ရှားမှုကြီး တဖြည်းဖြည်း အရှိန်လျော့သွားနိုးကိုသာ မျှော်လင့်လျက်ရှိနေကြသည်။
“ကျုပ်တို့အားလုံး ဒီမြေမှာပဲမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ကြတယ်။ တခြားပြေးစရာဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမရှိဘူး။ အိဒ်ပွဲရောက်လို့ ကျွဲနွား ပူဇော်စရာမရှိဘူးဆိုလည်း သိုးတွေ၊ ဆိတ်တွေပဲ ပူဇော်မယ်လေ” ဟု ကျောင်းကုန်းမြို့ရှိ မွတ်စလင်ဗလီဂေါပက ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်က ဆိုသည်။ ။
(ဆွေဝင်းရေးသား၍ ပေါလ်ဗရီးဇ်၊ ရော့စ်ရာဆဲ၊ သင်းလဲ့ဝင်းတို့ တည်းဖြတ်သည်။)
← မောင်ရင်ငတေ – ဘဝထဲက လူသား … ခါးဘုရင်မလေးများ
စက်တင်ဘာလထုတ် မိုးမခ (လလည်) မဂ္ဂဇင်း ထွက်ပြီ →
ကိုသန်းလွင် သတင်းဆောင်းပါး နိုင်ငံတကာရေးရာ
ကိုသန်းလွင် – ဂျပန်ရေဘေးကာကွယ်ရေး
4 thoughts on “ဆွေဝင်း (Myanmar Now) – အရှိန်တက်နေသော မွတ်စလင်စီးပွားရေးကို သပိတ်မှောက်ခြင်း”
like it must aware of indocoryna in history.
Nyi Lay Maung says:
What do you mean by indocoryna? I cannot find the meaning of coryna in English dictionaries!
အမဲသားမစားရေးနဲ့ကျွဲနွားမသတ်ရေးကိစ္စကို အင်္ဂလိပ်ခေတ်က လယ်တီဆရာတော်ဘုရား ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားရဲ့ကိုယ်တွေ့ဝထ္ထုမှာလည်းသူ့မိတ်ဆွေ ဗမာမ မယ်မြကုလားးနဲ့ရပြီးမူဆလင်ဖြစ်သွားပြီးနွားသတ်ရုံထောင်ထားကြောင်း။ နောက်ပိုင်းမှာ လင်ကနှိပ်စက်လို့ထွက်ပြေးလာရပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ဝင်ပြီး ကျွဲနွားမသတ်ရေးကိစ္စ္စလုပ် ခဲ့ကြောင်း ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ဖူးကြမှာပါ။
ဦးနုခေတ်ကလည်း မြန်မာပြည်ဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နိုင်ငံဖြစ်လို့ကျွဲနွားလိုလို့ ကျွဲနွားသတ်ခွင့်၊ အမဲသားရောင်းခွင့်တို့ကို တရားဝင်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဗက္ကရီးအစ်ရောက်ခါနီးမှာ မူဆလင်တွေကလဲနွားသတ်ချင်၊ ဦးနုကလည်း သူ့အနေနဲ့ သတ္တဝါတွေကိုသတ်ပြီးပူဇော်တာကို ခွင့်မပြု လိုပေမဲ့ ဘာသာရေးပွဲတော်ဖြစ်လို့ ခွင့်ပြုပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ “ဗက္ကရီး”ဆိုတာ ကုလားစကားမှာ ဆိတ်ကိုခေါ် တာဖြစ်လို့ ဆိတ်ကိုသာသတ်ပြီးပူဇော်ကြပါ၊ နွားကိုတော့ မသတ်ကြပါနဲ့လိုတောင်းပန်၊ သူ့ကဲဘိနက် ထဲကဝန်ကြီး ဦးရာရှစ်နဲ့ ဦးခင်မောင်လတ် ခေါ် အဗ္ဗဒူလတစ် အပါအဝင်မူဆလင်တွေကလဲနွားကိုသာ သတ်ချင်ကြတာကြောင့် တစ်ကြိမ်မှာ ဦးနုဟာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာနှစ်ဘက်ညှိနှိုင်း ကြကာ လူဦးရေအလိုက် နွားကောင်ရေ ခွဲတမ်းချပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာဗလီထဲမှာသာသတ်ကြရန်၊ အခြား ဘာသာဝင်များ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် နွားတွေကို မြို့ထဲမှာ ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီး မသွားကြဖို့၊ သွေး ပေနေတဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ မြို့ထဲမှာ မသွားကြဖို့တွေ သဘောတူကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွဲနွားမသတ်ရေးကိစ္စဟာ ဒီခေတ်မှာမှပေါ်လာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့ မွတ်စလင်စီးပွားရေးကို သပိတ်မှောက်ခြင်းဆောင်းပါးဟာ ဆိုလိုရင်းနဲ့သိပ်မအပ်စပ်ဘူး။
(၁) မူဆလင်ပိုင်ဘတ်စကား၊ မော်တော်ဘုတ်တွေမစီးကြရေး နှိုးဆော်နေကြကြောင်း။
(၂) မူဆလင်ပိုင်ဆိုင်တွေမှာဈေးမဝယ်ရေး “ကင်ပိန်း” တွေလုပ်နေကြကြောင်း။
(၃) မူဆလင်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကို သပိတ်မှောက်ရေးလုပ်နေကြကြောင်း။ စတာတွေရှိခဲ့ရင် အထောက်အထားတိတိကျကျနဲ့တင်ပြနိုင်ခဲ့ရင် ဆိုလိုရင်း မွတ်စလင်စီးပွားရေးကို သပိတ်မှောက်ခြင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုက်ညီသွားပါလိမ့်မယ်။